गम्भीर बनौं - Pradesh Today
कोरोनाभाइरसको प्रकोप तिव्र गतिले बढिरहेको छ । दैनिक सयको हाराहारीमा बढेको कोरोना संक्रमण प्रदेश नं. ५ र दाङ पनि अछुतो रहन सकेको छैन । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमण देखिएको र प्रदेशको ९ जिल्ला यसबाट प्रभावित भएका छन् ।
कोभिड—१९ को भण्डै चार सयको हाराहारीमा रहेका छन् भने ३८ जनाले कोरोना संक्रमण जितेका छन् । प्रदेश नं. ५ तराईका जिल्ला कोरोनाका हटस्पट भनिरहेका छन् ।
बाँकेको अवस्था अलि जटिल छ । रूपन्देही कपिलवस्तुको अवस्था पनि उस्तै छ । तराईका जिल्लाहरूमा बढी संक्रमण देखिरहेको अवस्थामा दाङमा पनि संक्रमितको संख्या १८ पुगेको छ । यो अवस्थाले सबै सचेत भएर कोरोनाविरूद्ध लड्नुपर्ने देखाइरहेको छ ।
तर सबै क्षेत्र र स्थानहरूमा बढी लापरवाही देखिएको छ । यस्तो लापरवाही हुनुको कारणले नै अहिले नेपालमा दैनिक संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ ।
दाङमा बुधबार एकैदिन १५ जना कोरोना संक्रमित बिरामी थपिए । यसअघि दाङमा तीनजनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । एकै दिन ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिएको दाङमा व्यवस्थापनको पूर्वतयारी कम देखिनु राम्रो हैन ।
कोरोना बढिरहेको अवस्थामा सबै प्रकारको व्यवस्थापन अनिवार्य छ । यसतर्फ स्थानीय सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । लकडाउनको दुई महिना पुग्दै गर्दा कोरोनाभाइरसको गति नेपालमा तिव्र हुनुलाई भन्दा पनि यो अवस्थालाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण कुरा बन्छ ।
लकडाउन कार्यान्वयन, नागरिक व्यवस्थापन, संक्रमण सूचना र तथ्यांक सार्वजनिकीकरणमा बढी चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यो अवस्था प्रदेश ५ सहित दाङमा कमजोर देखिन्छ । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनलाई ब्यवस्थित गरेमा मात्रै पनि कोरोना संक्रमण कम हुने र समुदायसम्म नपुग्ने अवस्था रहन्छ ।
यो अवस्थामा व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले आशंका गरिएका मात्रै भन्दा पनि जनसम्पर्कमा रहेकाहरू सबैलाई सुरक्षितको प्रत्याभूति गराउनु उत्तम हुन्छ । अहिलेसम्मकै अवस्थामा कोरोनासँग जोडिएका विषयहरूमा गम्भीरताको खाँचो देखि राखेको छ ।
व्यवस्थापन र उदारमा हतारभन्दा पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ । हतारमा मापदण्ड विपरीत गरिने कार्यले सबैलाई जोखिम बढाइरहेको छ । दाङमा रहेको ६ हजार ४८ क्वारेन्टाइन बेडको निर्माण भएको छ । त्यसमा ३६ सयजना बसेका छन् ।
अब सरकराले जिल्ला बाहिरबाट आउनेहरूको परिक्षण दायरा बढाएर जिल्ला तथा प्रदेशलाई जोखिम हुनबाट कम गराउनतर्फ लाग्नुपर्छ । दैनिक सयको हैन हजारको अंकले कोरोना परिक्षण बढाएर जानु अति उत्तम हुन्छ । यसतर्फ सोचेर बेलैमा सजक बन्ने हो की ?